Mabhuku akanakisa aJavier Sierra, Planeta Prize 2017 | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Vanyori, Mabhuku, Literature
Nezuro chete, zuva rovira, Xavier Sierra yakava iyo anokunda iyo 2017 Planet Mubairo nebasa rake "Gomo rekugadzira", yakanyorwa uye yakapihwa pasi pezita rekunyepedzera Victoria Goodman. Chekupedzisira, iri basa richaburitswa muDhijitari Planeta zviri pachena, pasi pemusoro wenyaya "Moto usingaonekwe".
Asi, ndeapi mamwe mabhuku akanyorwa zvakanaka naJavier Sierra? Wakamborava chero chinhu chake zvisati zvaitika? Nhasi, muActualidad Literatura, tinokupai ake matatu akanakisa mabhuku. Isu tinokuudza zvishoma nezveumwe neumwe wavo uye isu tinokuudza iwe ongororo iyo inokodzera yekunyora kushoropodza.
1 "Ngirozi yakarasika" (Javier Sierra, 2011)
2 "Kudya kwemanheru kwakavanzika" (Javier Sierra, 2005)
3 "The Blue Lady" (Javier Sierra, 1988 na2008)
"Ngirozi yakarasika" (Javier Sierra, 2011)
Ndichiri kushanda kudzoreredzwa kwePórtico de la Gloria muSantiago de Compostela, Julia Álvarez anogamuchira nhau dzinoshungurudza: murume wake akabiwa munzvimbo ine makomo kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweTurkey. Asingazivi, Julia achabatanidzwa mumujaho wekuda kudzora matombo maviri ekare ayo, sezviri pachena, anotendera kusangana nemasimba emweya uye mavanofarira kubva kusangano risinganzwisisike rekumabvazuva kumutungamiriri weUnited States.
Iri basa rinosiya kumashure ese magungano eiyo genre, kuisazve uye kusundira muverengi pane chiitiko chavasinga kanganwa.
Iri bhuku ra Mapeji 544 Ichakunyudza iwe munyika yekunyepedzera inoita kunge chaiyo chaizvo uye mune ruzivo rweakakosha nhoroondo dhata sezvazvinojairwa mune yega uye yega yebhuku raJavier Sierra. Chimwe chinhu chakakosha kuwedzera nezvazvo ndechekuti nebhuku rino akazadzisa iyo Latin Book Awards kubva kuUnited States.
"Kudya kwemanheru kwakavanzika" (Javier Sierra, 2005)
Iri bhuku rakarira zvakanyanya uye nderekuti rakabatana panguva pamwe neakakurumbira "Da Vinci Code" de Dan Brown. Hermetic uye inoratidzira, "Kudya kwemanheru kwakavanzika" ndiyo nhoroondo inopa maonero echimurenga pane vese Leonardo da Vinci neunyanzvi hwake, Chirairo chekupedzisira. Mushure mekuverenga bhuku iri, hauzomboona iyo Renaissance nenzira imwechete zvakare.
Milan, 1497. Leonardo ari kuisa pekupedzisira pazamu rake rakakura. Asi Pope Alexander VI vanoziva kuti kurohwa kwavo kunovanza meseji yekumhura iyo yavakatsunga kuisimbisa kuitira kupa mhosva munyori wayo.
Hakuna Chitsvene Grail kana Eucharist mune ino Chirairo Chekupedzisira; hapana kana mucherechedzo wegwayana pamahwendefa, uye vaapositori vanovanza mifananidzo yevanokosha vanyengeri vezana ramakore rechiXNUMX. Uye nei Leonardo achizviratidza pakati pavo?
Nyika yese isingazivikanwe kuti zvichave zvakanaka kuwana nerubatsiro rweiyo nyowani 2017 Planet Prize. Haufunge?
"The Blue Lady" (Javier Sierra, 1988 na2008)
Kunyangwe pakutanga, "The Blue Lady" yakaburitswa mugore 1988, yakadzokororwa ikabuditswazve muna 2008. Zvakare, bhuku rine fungidziro, chakavanzika uye enigmas ndiwo marongero ezuva.
Pane zvakavanzika izvo Providence zvisingakwanise kuramba zvakavanzwa zvakare. Iyi ndiyo chete nzira yekutsanangura kuti sei chirongwa chesainzi cheVatican chakanangana nekutora mifananidzo nemanzwi kubva kure kure zvakatorwa neDhipatimendi reDziviriro muUS uye zvinomanikidza Jennifer Narody, mumwe weavo vakanakisa vamiririri, kutarisana nechipo kubva panguva greats. mystics.
Zvichakadaro, kuSpain, Destiny inotungamira mudiki mutapi venhau kuti aongorore hupenyu hwasista kubva kuGolden Age uyo, asina kana kumbosiya imba yake muSoria, akaparidza nenzira inoshamisa muNew Mexico, makiromita zviuru gumi kubva.
Maitiro ake akanyatso nyarara anovanza zaruriro inotyisa. Nenhau iyi, Javier Sierra anotizarurira mhando inonakidza ye "kuferefeta zvinyorwa."
Uye iwe, nderipi rimwe bhuku kana kuti zviri nani, ndeapi mamwe mabhuku matatu aunofunga kuti ndiwo akanakisa nemunyori? Javier Sierra ave mumwe wevanyori veSpanish ve bestseller mazhinji anozivikanwa pasi rese, saka isu tinofunga kuti iyo Planeta Mubairo (unokosha kwazvo mubairo weSpanish) unongova mumwe weawo anoramba achiwanikwa.
Chero zvazvinofanira kuve mune ramangwana, nepo iyo Dhizaina Planeta ari kupedzisa ruzivo rwechinyorwa chitsva uye basa rinokunda reSierra, apa une mabhuku matatu akanaka kwazvo nemunyori. Uchatangira kupi ruzivo rwako rwekunyora?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku akanakisa aJavier Sierra
Thompson naWambaugh, akanyanya matema echinyakare kudonha kwakanyanya